मङ्गलबार, ०५ कार्तिक २०७६, १० : २४
बूढी बोक्ने प्रतियोगिता
उत्तर अमेरिकामा गत शनिबार १८ औं संस्करणको श्रीमती बोक्ने प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । मेनेमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विवाहित जोडीहरु संलग्न थिए । प्रतियोगितामा श्रीमती बोकेर कुद्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
६० वर्षदेखिको केरा र पानीको भरमा
भारतको मध्यप्रदेशकी एक ७५ वर्षे महिलाले आफू ६० वर्षदेखि एक सिता पनि अन्न र खानेकुरा नखाई केराको भरमा बाँच्दै आएको बताएकी छन् । सुन्दरेल गाउँकी ति वृद्धबारे एनटीडी टिभीमा खबर आएको थियो ।
बाघको डरले १२ बाँदरलाई हृदयघात
बाघको गर्जनकै कारण तर्सिएर भारतको जंगलमा १२ बाँदरलाई हृदयघात भएर मरेको त्यहाँका अधिकारीहरुले फेला पारेका छन् । सुन्दा अचम्म लाग्यो होला तर यो कुरा साँचो हो । पाटे बाघले तर्साएकै कारण एक दर्जन बाँदरको मृत्यु भएको खबर यतिबेला संसारभर भाइरल भएको छ ।
रेस्टुराँमा फट्यांग्रोको मेनु
बेल्जियमको ब्रसेल्समा ‘लिटल फुड’ नामको रेस्टुराँले आफ्नो खानेकुराको मेनुमा फट्यांग्रोको परिकार प्रस्तुत गरेसँगै तरंग ल्याइदिएको छ । फट्यांग्राको परिकार बनाउन उनीहरुले आफ्नो फार्ममा क्रिकेट नामको फट्यांग्राहरु पाल्दै आएका छन् ।
१११ वर्षसम्म बाँच्नुको रहस्य
बेलायतकी सबैभन्दा वृद्धा १११ वर्षकी भइन् । उनले आफू १११ वर्ष बाँच्नुका पछाडि नौलो रहस्य बताएकी छन् । उनको अनुभव पत्याउने हो भने उनी प्रत्येक रात एक सट ह्विस्की पिउँछिन् । ग्रेस जोन्स नामकी ती वृद्धले केही दिनअघि १११ औं जन्मदिन मनाएकी थिइन् ।
पाकिस्तानका एक नाईले कपाल काट्न १५ कैंचीको प्रयोग गर्ने गरेको नौलो खबर आएको छ । उनले एकै पटकमा १५ कैंचीको प्रयोग गरेर कपाल कटाउँदै आएका छन् । ३३ वर्षे सादिक अलि नामका ती पाकिस्तानीको लाहोरमा सानो सैलुन छ ।
नौला रोचक रेर्कडहरु
लामा नङ हुनेहरुको पुरानो रेर्कड ताड्दै अयन्ना विलियम्सले लामो नङ हुनेको कीर्तिमान कायम गरेकी छन् । टेक्सासको होउसटनकी विलियम्सका हातका नङको लम्बाई नाप्ने हो भने १८ फिट, १०.९ इन्च पुग्छ ।
माहुरीको दाह्री बनाएर विश्व कीर्तिमान
क्यानडाका एक मानिसले आजसम्मकै धेरै माहुरी भेला गरेरर ठूलो ‘बी–बर्ड’ बनाएसँगै विश्व कीर्तिमान राख्न सफल भएका छन् । योसँगै उनको नाम गिनिज बुकमा लेखिने भएको छ । जुआन कार्लोस नोगुइएज ओर्टिज नामका ती व्यक्ति अन्टारियोको फार्ममा माहुरी पाल्दै आएका छन् ।
जापानका विचित्रका विवाह फोटो
जापानको टोकियोमा रहेका फोटोग्राफर हारुहिको कावागुचीले खिच्दै आएका नौलो फोटो शृंखला हेर्नेहरुको केही समय सास अड्किन्छ । ‘फ्लेस लभ’ शीर्षकमा हारुहिले भ्याक्युम सिल लगाइएका प्लास्टिक झोलामा जोडीहरुलाई राखेर फोटोहरु खिचाएसँगै सनसनी फैलिएको छ ।
बूढो बाँदर बितेपछि
चिडियाघरमा हुर्किएको आजसम्मकै बूढो बाँदर कहलिएको ४३ वर्षे माकुरे बाँदर बितेको छ । अरु माकुरे बाँदरको साधारण आयु २५ वर्ष मात्र हुन्छ । गत शुक्रबार न्युयोर्कको सेनेका पार्क चिडियाघरले आफ्नो चिडियाखानामा रहेको सबैभन्दा पुरानो जनावर बितेको भनेर फोटो सार्वजनिक गरेको थियो ।
पेरिसमा पहिलो नग्न पार्क
फ्रान्सको पेरिसमा पहिलोपटक नग्नता मन पराउनेहरुका लागि नग्न पार्क खुलेसँगै उक्त पार्क अचेल चर्चित हुन थालेको छ । सानो बाटोले छुने अद्र्ध एकान्तमा रहेको बोइस डे भिन्सेन्नेस पार्कमा १० जना प्रकृतिप्रेमी घाँसमा पल्टिएर तातो घाममा शरीर सेकाउँदै छन् ।
कुकुर बचाउन खुट्टाको सहारा
मानिसमा मानवता हराएको छैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण मलेसियाली एक युवाको भाइरल भएको भिडियो बनेको छ । कुलोमा डुबेको एक कुकुर बचाउन मलेसियाका एक युवा हत्त न पत्त आफ्नो खुट्टाको प्रयोग गरेका हुन् ।
पूर्व पोर्नस्टारलाई आएसको धम्की
संसारभर धेरै हेरिने र खोजिने पोर्नस्टारलाई आईएसका सदस्यबाट अनलाइनमा धम्की दिन थालिएको छ । २४ वर्षे पूर्व पोर्नस्टार मिया खलिफाले आफूलाई अनलाइनमा आईएसका मानिसहरुले ज्यान मार्ने धम्की दिएको र टाउको छिनाउने धम्की दिएको बताएकी हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पोज
परिचय नखुलेका एक युवाको विचित्रको फोटो पोजले सामाजिक सञ्जालमा गत सातादेखि सनसनी मच्चाइरहेको छ । ठाउँठाउँमा छरिएर रहेका मानिसहरु ती युवाको फोटोलाई आफैँ मनपर्दी म्यानुपुलेट गर्दै ट्वीटरमा भाइरल बनाइरहेका छन् ।
तर पुच्छार कहाँ हरायो ?
चीनका एक मानिस कान चिलायो भन्दै अस्पताल भर्ना भएका थिए । सर्जनहरुले उनको कान कन्याइदिएर मात्र उनको चिलाउने रोग निको भएन । यसपछि अप्रेसन गरेर कानबाट माउसुली नै निकालिदिए ।
बाँदरजस्तो एक आँखे सुँगुर
सुँगुरले जन्माएको हेर्दा बाँदरजस्तो देखिने एक आँखे छाउरो अचेल रातारात चर्चित हुन पुगेको छ । खैरो रङको उक्त विचित्रको छाउरो क्युबाको सान जुआन र मर्तिनेज क्षेत्रको पिनार डेल रियो प्रान्तमा जन्मिएको थियो ।
एक अन्डा दुई चल्ला
यो संसार पनि अजिबको छ । बाँच्नु मात्र पर्छ नानाभाँतीका चिजहरु देख्न पाइन्छ । त्यस्तै एउटा रोचक कुरा छ, एउटा हाँसको अन्डाबाट दुई चल्ला कोरलिएको खबर । एक महिला इन्क्युबेटरमा राखिएका हाँसका अन्डामध्ये एक अन्डाबाट दुई चल्ला कोरलिएपछि अचम्ममा परेकी छन् ।
काम गर्न दिनहुँ ल्यापटप, सुट र फोन बोकेर पौडने मानिस
मानिसहरु जीविका गुजार्न कस्तोसम्मका संघर्ष गर्लान् ? तपाईं अनुमानसमेत गर्न सक्नु हुन्न होला । उनी अरु मानिसजस्तो बस, ट्रेन वा साइकल कुर्दैनन् । उनी हुन्, जर्मनीको म्युनिखका ४० वर्षे बेन्जामिन डेभिड । नदीको २ किलोमिटर पौडीबाटो हुँदै काम गर्नैका लागि डेभिड पौडने गर्छन् ।
अन्टार्कटिकामा काम गर्ने दुई जना बेलायती गाइडले आर्कटिक टेरिटरीमा बिहे गर्ने पहिलो जोडी बन्न पुगेका छन् । टम सिल्भेस्टर र जुली बलमे अन्टार्कटिका प्रायद्विपको पश्चिममा रहेको एडिलेड आइल्यान्डस्थित रदेरा रिसर्च स्टेसनमा बिहे गरेका हुन् ।
छुट्टी मनाउने क्रममा खिचिएको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको तस्बिर यतिबेला भाइरल भएर मेमे र ट्रोलमा निकै चर्चित भएको छ । पुटिन अगस्टको सुरुवातदेखि दक्षिणी साइबेरियास्थित समुद्री क्षेत्र छुट्टी मनाइरहेका छन्।